शिक्षक लाईसेन्सः माध्यामिक तहको अंग्रेजी विषयको लाईसेन्स परीक्षा पुनः हुने
असोज, भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले (लाईसेन्स) को परीक्षा अन्तर्गत शुक्रबार (असोज १० गते) भएको अंग्रेजी विषयको बस्तुगत तर्फको परीक्षा रद्द गरेको छ ।
माध्यमिक तहको अंग्रेजी विषयको वि. न.३४, ३५ र ३६\_०७६\_७७ को वस्तुगत तर्फको “घ” सेट (कि ) को प्रश्नपत्रमा त्रुटि देखिएकोले उक्त विषयको वस्तुगत परीक्षा कार्तिक २३ गते पुनः सञ्चालन गर्ने आयोगले बताएको छ । विषयगत तर्फको परीक्षा भने यथावत राखिएको पनि आयोगले बताएको छ । बस्तुगत प्रश्नको बहुबैकल्पिक मा प्रश्नपत्रमै सही उत्तरमा बोल्ड गरी प्रश्न आएको थियो ।
आयोगले एक आइतबार एक सूचना निकाल्दै कात्तिक २३ गते परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगले उक्त परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ । । परीक्षा हुने समय र स्थान पछि सार्वजनिक गरिने आयोगले जारी गरेको सूचना उल्लेख गरिएको छ ।
समयमै थाहा पाएकाले समाधान गरिएको दावी गर्दै आयोगले सुरुमा परीक्षा रद्द नहुने बताएको थियो । तर आलोचना बढे पछि उक्त घटनाले परीक्षाकै मर्यादामा आँच आएको भन्दै आईतबार बसेको आयोगको बैठकले परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागद्वारा १७६ जना कर्मचारी माग
१६ साउन, काठमाडौँ । सरकारले सबै नेपाली नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र…
सरकारद्वारा १,९६५ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना, हेनुस् कुन निकायमा कति ?
१६ साउन, काठमाडौँ । नोवेल कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को महामारी र…
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स माग्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी, दिने होइन त आवेदन ?
सिम्बुवा रेमिट हाइड्रोले माग्यो बिभिन्न पदमा कर्मचारी,दिने होइन त आवेदन ?
स्वास्थ्य कार्यालयले माग्यो कर्मचारी, दिने होइन त आवेदन ?
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा खुल्ला तथा समावेशी परीक्षाको लागि साउन ११ सम्म दरखास्त बुझाउन सकिने